DFS oo ka jawaabtay eedeymo loo soo jeediyey | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta DFS oo ka jawaabtay eedeymo loo soo jeediyey
DFS oo ka jawaabtay eedeymo loo soo jeediyey
Dowladda Soomaaliya ayaa markii u horraysay jawaab ka bixisay dhaleecayntii uga timid dalal ka tirsan Beesha Caalamka oo si adag u dhaliilay Hannaanka loo maray Xilka qaadistii Ra’iisul wasaare Xassan Cali Khayre.
Golaha Wasiirada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo Axaddii Shalay Shir deg deg ah ku yeeshay Muqdisho ayaa ka codsaday dalalka Beesha Caalamka in ay ixtiraamaan madax-bannaanida Soomaaliya iyo Go’aannada ay gaaraan hay’adaha Dastuuriga ah ee Dalka.
Golaha ayaa sidoo kale dalalka Beesha Caalamka ka codsaday in wixii talooyin ah oo ay Soomaaliya u hayaan ay ku soo gudbiyaan marinka Dibloomaasiyadda waxaana ay ka mahadceliyeen taageerada dhinacyada kala duwan leh ee Beesha Caalamku siiso Soomaaliya.
Dhinaca kale Golaha Wasiirada Soomaaliya waxay go’aamiyeen in la dardar geliyo Hawlaha shaqo ee Dowladda si aysan Shaqadaas hakad u gelin Kalsooni kala noqoshadii Golaha Wasiirada ayna u sii socdaan adeegyada Xukuumaddu u hayso Bulshada.
Maqaal horeMadaxweynaha Galmudug oo shaaciyay u jeedka uu u yimid Muqdisho
Maqaal XigaSarkaal Sare oo caawa lagu dilay Muqdisho